Militariga Sudan iyo Mucaaradka Isbedel doonka ah oo ku heshiiyey awood qeybsi… – Hagaag.com
Militariga Sudan iyo Mucaaradka Isbedel doonka ah oo ku heshiiyey awood qeybsi…
Posted on 5 Luulyo 2019 by Admin in World // 0 Comments
Milatariga Sudan iyo Mucaaradka Isbeddel doonka ayaa gaaray heshiis awood qeybsi ah sida uu sheegay Mohamed Hassan Lebatt, oo u hadlay guddiga dhex-dhexaadinta Midowga Afrika.
Labada dhinac ayaa isku raacay in la dhiso guddi isku dhaf ah oo madax bannaan, kaas muddo saddex sano ah talada dalka haynaya, iyagoo magacaabay gole ka kooban 10 xubnood oo isugu jira Millitari, rayid iyo hal hoggaamiye oo u dhexeeya dhinacyada. Waxaa dib loo dhigay soo magacaabida xubnaha Golaha Shacabka ka mid noqonaya.
Golaha ku meel gaarka ah ee Millitariga iyo hoggaamiyeyaasha rayidka dalka Sudan ayaa sidoo kale isku raacay in ay billaabaan baaritaan hufan oo madaxbannaan, si loo ogaado ciddii ka dambeysay rabshadihii dadka badan lagu dilay ee 3-dii June ka dhacay magaalada Khartoum.
Waa heshiiskii ugu horreeyay ee ay si wadajir ah ay u gaaraan Millitariga iyo mucaaradka is beddel doonka Sudan, tan iyo markii talada laga qaaday Bishii April ee sanadkan Madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al-Bashiir.